Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Sandals Resorts dia manamora ny famerenana indray ny fitiavana
Satria efa tapitra ny Andron'ny mpifankatia dia tsy midika izany fa tsy afaka mankalaza ny fitiavana ny mpivady mandritra ny 365 andro isan-taona! Sandals Resorts dia manome aingam-panahy ny mpivady hanjaka ny filalaovana sy ny filan'ny nofo isan'andro amin'ny alàlan'ny fampidirana fonosana fanampiny ho an'ny Rekindle Romance, azo amandrihana mandritra ny telo alina na mihoatra. Raha vonona ny handositra romantika ianao, ity fonosana ity dia manambatra ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana, ny rendrarendra ary ny fitsangatsanganana ho lasa traikefa fialan-tsasatra farany tantaram-pitiavana.
Ny fonosana Rekindle Romance dia azo ampiana ary azo ampiasaina hatramin'ny faran'ny taona - satria ny fitiavana dia natao hankalazana isan'andro, fa tsy amin'ny volana febroary fotsiny! Ity fonosana ampiana romantika ity dia misy:
• Tavoahangy iray an'ny Champagne Moet & Chandon + Chocolate
• Fitsangantsanganana amoron-dranomasina roa ora - Raiso ny fahitana ny morontsiraka milamina avy amin'ny seza tsara indrindra ao an-trano fenoina divay mamirapiratra na divay ao an-trano.
• Sakafo mihinana labozia tsy miankina - Amboary ny toe-po ho an'ny tsingerintaona nahaterahana, fitsingerenan'ny andro nahaterahana na koa tolo-kevitra miaraka amin'ny sakafo hariva labozia ho an'ny roa. Ity sakafo hariva tsy miankina efatra ity dia feno miaraka amin'ny serivisy manokana sy menus, izay misy tavoahangy Ruffino Prosecco sy divay tsy misy fetra an'ny divay Robert Mondavi Twin Oaks®.
• Spa Refresher - Nahazo aingam-panahy avy amin'ny atiny tsara tarehy sy be voninahitra any amin'ireo nosy Karaiba, ity mpitsoa-pialana spa ity dia mitombo hatrany amin'ny ambaratonga vaovao. Ny serivisy ho an'ny roa dia misy ny Massage Lavender Scalp 30 Minute na Mass Massage ho an'ny endrika fialan-tsasatra farany sy fanavaozana.
• Photobook fialan-tsasatra Romance - Fenoy ny sarinao mahafinaritra mba hankamamiana ny fialan-tsasatrao na fahatsiarovana ny volan-tantely mandrakizay.
Sandals Resorts dia mitovy dika amin'ny tantaram-pitiavana, amin'ny ampahany kely noho ny fananganana ny mpanorina sy ny filoha, Gordon "Butch" Stewart. Fantatra amin'ny anarana hoe "The Cupid of the Caribbean," Stewart dia nanangana Sandals Resorts tamin'ny zavatra iray tao an-tsaina - olona roa mifankatia. Ny fitiavana dia eny amin'ny rivotra 365 andro isan-taona any amin'ny 15 Luxury Included® Sandals Resorts.
Ho an'ireo mpivady mahatsiaro ho sambatra am-pitiavana, dia mbola manam-potoana hidirana amin'ny "Fitiavana no ilainao sy ny kapa kapa kapa" izay atao hatramin'ny 28 febroary 2021, noho ny fahafahan'izy ireo mandresy fitsangatsanganana mandritra ny fito andro sy enina alina ao amin'ny trano fisakafoanana natao ho an'ny roa.